NeSvondo vatsigiri veDynamos vakabuda muRufaro Stadium vachichema mushure mekunge chikwata chavo charohwa 1-0 neCaps United ndokutadziswa kuenda panhongonya yeCastle Lager Premier Soccer League kekutanga mwaka uno.
Kechipiri makore maviri akateverana Dembare yakarohwa nechibodzwa kubva kuna Dominic Chungwa uyo akakanda zvekare munhandare imwe cheteyo gore rapera apo maGreen Machine akarova maGlamour Boys 1-0.
Chungwa aive asipo apo Makepekepe akarohwa 2-0 neDynamos masvondo matatu apfuura mushure mekumbomiswa nevePremier Soccer League nemhaka yemayellow kadhi ake aive adarika akatarwa nemutemo.
Asi nezuro, Chungwa ndiye akapatsanura zvikwata zviviri izvi kunyange hazvo Caps United ingadai yakakunda nezvibodzwa zvakawandisa dai vakashandisa mikana yakawandisisa yavakawana.
Mutevedzeri wemurairidzi weCaps United Fungai Kwashi anoti maGreen Machine aikodzera kukunda sezvo vaive pamsuroro peDembare kubva mutambo uchitanga kusvika kumagumo kwawo
Dynamos iyo yaive isina vatambi vayo vana Denvar Mukamba, Lincoln Zvasiya, Tichaona Chipunza na Christian Epoupa yaitatarika zvinotyisa asi mumwe mutsigiri wayo Muzvare Nyaradzai Nyikadzino vanoti nemamiriro aive akaita zvinhu chikwata chavo chakaita nepese pachinogona asi zvakaramba.
Dynamos iri kuramba iri pachidanho chechitatu, ichitevera FC Platinum neChicken Inn iyo iri kutungamira gungano iri.
MaGreen Machine ave pachinhanho chechinomwe nemapoinzi makumi matatu nemashanu.
Asi Fungai Kwashi mutevedzeri wemurairidzi weCaps United anobvuma kuti zvemukombe weligi zvaramba achiwedzera iye kuti vari kutarisira kutora mukombe weChibuku Super Cup uyo varikutanga kutamba ne Ngezi Platinum Stars svondo rino munharaunda yekutanga.
Makwikwi eChibuku Super Cup aya akatanga svondo rino apo Bantu Rovers yakarova Tsholotsho Pirates 3-1, Yadah ikakunda Hwange 1-0 mumitambo yakatambirwa muMandava Stadium neMugovera.
Yadah yave kusangana neChicken Inn munharaunda yekutanga, Bantu Rovers ichibandanawo ne How Mine.
Totarisa mitambo yeEnglish Premier League …
Zvikwata zvemuguta reManchester, Manchester City neManchester United zvakakanda zvibodzwa gumi mumitambo yazvo yekupera kwesvondo.
Manchester City yakabvarura Watford 6-0 ndokuenda pamusoro peEnglish Premier Soccer League ichitora chinzvimbo change chiine Manchester United kunyange hazvo zvikwata izvi zvine mapoinzi akaenzana nezvibodzwa zvakaenzana zvekare.
Zvikwata zviviri izvi zvine mapoinzi gumi nematatu kubva mumitambo mishanu asi Manchester City ndiyo yave pamusoro sezvo izwi rekuti City ndiro rinotanga kuchitevera United.
United yacho yakazvambaradza Everton 4-0 nezvibodzwa zvakabva kuna Antonio Valencia, Henrik Mkhitaryan, Lumelo Lukaku na Antony Martial ndokupinda mumapoinzi gumi nematatu kubva mumitambo mina.
Asi Chelsea yakapona neburi retsono ndokuita mangange 0-0 neArsenal mumutambo uyo Arsenal yakatamba seyakasvikirwa ikaita munyama wekusatora mapoinzi ese matatu.
Real Madrid yave pachinhanho chechina mushure mekushanya ndokunorova Real Sociadad 3-1 nezuro ndokupinda mumapoinzi masere.
Asi chikwata chine mukombe weLa Liga ichi chakasiiwa neBarcelona nemapoinzi mana mushure mekunge Barcelona yacho yakafambawo ndokunorova Getafe 2-1.
Barcelona yatora mapoinzi ese mumitambo mina yavatamba asi vane maponzi maviri chete pamusoro peSevilla iyo iri pachinhancho chechipiri uyezve isati yambokundwawo zvekare kubvira makundano aya atanga.
Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yeMalaga neDeportivo La Coruna idzo dzisina kana poindi imwechete mushure mekurohwa mumitambo yese mina yavatamba pari zvino.